माइग्रेनको दुखाईबाट आराम दिलाउनुको साथै कपाल पनि सुन्दर बनाउँछ, हेड मसाज! यस्ता छन् अन्य फाइदा – Etajakhabar
माइग्रेनको दुखाईबाट आराम दिलाउनुको साथै कपाल पनि सुन्दर बनाउँछ, हेड मसाज! यस्ता छन् अन्य फाइदा
ताजा खबर:- दिनभरिको कामकाजको कारण थकान महसूस भैसकेपछि दिमाग कुनै पनि कुरा सोच्ने स्थितिमा हुँदैन । थकान पूर्ण शरीरमा भारी रहन्छ । यस्तो अवस्थामा मसाज तपाईलाई एनर्जी प्रदान गर्न मद्दतगार हुनसक्छ । टाउकोको मसाज गर्नाले रक्त प्रवाह दुरुस्त हुन्छ । यसबाट दिमागमा प्रयाप्त मात्रामा अक्सीजन पुग्छ र निन्द्राको गुणवत्तामा सुधार हुन्छ । राम्रो किसिमको तेलले जब तपाई आफ्नो कपालमा मसाज गर्नुहुन्छ तब यसबाट मानसिक शान्ति मिल्नुको साथै कपाल सुन्दर र स्वस्थ बन्छ । यसको साथै टाउको मसाज गर्दा विभिन्न फाइदा हुन्छ । आज हामी टाउको मसाज गर्नुको फाइदा बारे चर्चा गर्दैछौँ, जुन यसप्रकार छन् ।
माइग्रेन र टाउको दुख्नु- कहिले-काहीँ तनाव या चिन्ताको कारणले ढाड र टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ । यसको कारणले तपाईको दैनिक जीवनको गतिविधि प्रभावित हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा यदि तपाई टाउकोमा मसाज गर्नुहुन्छ भने यसबाट सम्पूर्ण शरीरमा रक्तप्रवाह तीव्र हुन्छ ।
कपालको लागि फाइदाजनक- यदि तपाई आफ्नो कपाल लामो, बाक्लो र सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने मसाज यसमा तपाईलाई मद्द गर्न सक्छ । मसाज तपाईको कपाललाई प्रयाप्त पोषण दिन्छ । यसबाट तपाईको स्केल्प्समा रक्त प्रवाह दुरुस्त हुन्छ र कपाल जरै देखि बलियो हुन्छ ।
राम्रो निन्द्रा ल्याउँछ- मसाजको सहायताले तनाव भगाउन मद्दत मिल्छ । यदि तपाई पनि तनाव या कुनै अन्य कारणले अनिन्द्राको शिकार हुनुहुन्छ भने यस समस्याबाट आराम दिलाउन मसाज निकै मद्दतगार हुनसक्छ । मसाजद्वारा मानसिक तनावमा निकै आराम मिल्छ र निन्द्राको गुणवत्तामा सुधार हुन्छ ।
एनर्जी लेभल बढाउँछ- आजको व्यस्त जीवनशैलीमा थकान र अनिन्द्राको समस्या हुनु सामान्य कुरा हो । यस्तो अवस्थामा एनर्जी लेभल निकै कम हुन्छ । जब तपाई टाउकोको मसाज गर्नुहुन्छ भने यसबाट तनाव हट्छ र राम्रो निन्द्रा आउँछ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १६, २०७४ समय: २१:४४:२८